Shir Jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud… – Hagaag.com
Shir Jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud…
Posted on 2 Oktoobar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si wadajir ah shir jaraa’id ugu qabtay magaalada Muqdisho waxayna ka hadleen siyaasadda dalka.
“Marnaba dalkan dhibaatada ka jirta ka hadalkiiisa ugama hari doono Wiilal yar yar oo masaakiina oo qurbaha jooga ama lamarin habaabiyey ee caaytamaya, aana wadeynaa waxa aan xaqa u leeyahay ayuu yiri” Sheekh Shariif.
Sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in dalkaan ay ku dhex-jiraan laba cadow oo kala ah Shabaab iyo Dowladda, waxana uu ku tilmaamay wasiirada dowlada kuwo aan ka hadli karin xaqa iyo wixii jira.
Sidoo kale, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa ka hadlay arrimaha Kismaayo waxana uu xusay in Shariif Sheekh Axmed uu safarkiisii Kismaayo ahaa mid lagu doonayay in lagu dhagaysto tabashada Jubbaland iyo shacabkeeda.
Isagoo ka hadlay siyaasada dowlada federalka ayuu Xasan Sheekh Madaxweynihii hore ee dalka ku tilmaamay inay tahay mid dowladu isku koobtay siyaasadda dalka.
Shirkan jaraa’id oo ay sida wadajirka ah u qabteen Madaxdweynayaashii hore ee dalka Shariif iyo Xasan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii qaar ka mid ah xisbiyada ka jira dalka oo ay ka mid yihiin xisbiyada ay madaxda ka yihiin labadan siyaasi ay ku midoobeen isbahaysi.